musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » Chii chinonzi MVP uye Maitiro Ekushandisa Izvo Mune Hardware Dhizaini
Iwe ungadai wakanzwa nezve MVP - Chishoma Chinogoneka Chigadzirwa - uye iwe pamwe wakazvibatanidza ne software. Muchokwadi, pfungwa iyi inoshanda kune Hardware zvakare. Muchikamu chino, iwe unozodzidza nezve MVP uye uone kuti unganyatsoishandisa sei mune yako yemagetsi chigadzirwa dhizaini.
Mumwe anogona kudzikisa mutengo uye nguva yekugadzira uye kugadzira icho chigadzirwa chine mashoma maficha.
Uchishandisa chirevo cheMVP unowana rumwe ruzivo nezve zvavanofarira vatengi.
MVP chigadzirwa chakagadzirwa neiyo shoma huwandu hwesimba.
Zviripachena kuti dhizaini uye kugadzira kwechigadzirwa, kungave software kana Hardware, zvinoda simba uye mutengo. Muchiitiko apo chigadzirwa chitsva kana iwe usina chokwadi nezve maonero evatengi nezvazvo, unogona kudzikisa mutengo uye nguva yekugadzira uye kugadzira icho chigadzirwa chine mashoma maficha. Nomuzvarirwo, kugadzira chigadzirwa iwe unogona chete kufungidzira izvo izvo vatengi vako vanoda uye vari kuda kubhadhara. Neichi chikonzero, iwe unogona kushandisa musimboti weMVP uye uwane rumwe ruzivo nezve izvo vatengi zvavanofarira. Nokuita kudaro, iwe unotora mhinduro kubva kune vako vekutanga vatengi. Izvi zvinokutendera iwe kukudziridza rako ramangwana chigadzirwa uchivimba nemaonero evatengi. Nekudaro, MVP chigadzirwa chakagadzirwa neiyo shoma huwandu hwesimba.
Mashandisiro ekushandisa MVP mune Hardware?
Chaizvoizvo, kushandiswa kweichi pfungwa hakusiyane mukugadzirwa kwehardware. Kutanga, iwe unofanirwa kuona yakasarudzika seti yezvinhu zvechigadzirwa chako. Ramba uchifunga kuti chimwe nechimwe chinhu chinowedzera kuomarara kwechigadzirwa chako uye, nekudaro, mutengo uye kuyedza kwekugadzirwa kwazvo. Kuti udzivise kuwedzera zvakawandisa maficha, sarudza. Pakutanga, unogona kunyora zvese zvinogona kuitika pachigadzirwa chako, uzviise nekuoma uye mutengo uye woisa pekutanga uchifunga izvo zvinofungidzirwa zvinodiwa nevatengi.
Tevere, sarudza mutengo uye nguva yekuvandudzwa kwechinhu chimwe nechimwe uye, pakupedzisira, mutengo wechigadzirwa chako. Tsvaga chiyero pakati pemutengo wekugadzira nemutengo wechigadzirwa chako. Zvinokurudzirwa kuti utarise pane izvo zvinhu zvaunotenda kuti zvichawedzera iyo yepamusoro purofiti miganho kune chako chigadzirwa.
Mushure mekumisikidza iwo maficha, bvisa avo vane kukwirisa kwepamusoro uye mutengo kubva kumusoro kwerondedzero yako. Zvinhu zvakaoma uye zvinodhura hazvigone kugadzirwa maererano neMVP. Panzvimbo iyoyo, tarisa maficha-anodhura maficha neakakwira vatengi kukoshesa. MVP inofanira kusanganisira zviri nyore uye zvisingadhuri maficha.
Tevere, tora icho chinogoneka chinogoneka chigadzirwa pamusika nekukurumidza sezvazvinogona. Pfungwa yekutanga yeMVP haingorarame chete mune yakaderera mitengo asiwo mune yakashoma nguva inoshandiswa pane yekutanga chigadzirwa dhizaini. Saka, chengetedza nguva yako uye enderera kuti udzidze zvinodiwa nevatengi. Iwe unogona kuunganidza mhinduro kubva kune vatengi kuburikidza nekutengesa uye dzakasiyana data rekutengesa. Iyi data ichashandiswa kune yemberi vhezheni yechigadzirwa chako icho chinosangana nezvinodiwa nevatengi. Panguva imwecheteyo, uchishandisa mhinduro iwe unogona kusarudza kugadzira chigadzirwa chakasiyana. Ramba uchifunga kuti zvimwe zvisina basa maficha eMVP yako anozoiswa kunze kweshanduro nyowani dzechigadzirwa chako.
Nekudaro, MVP inobvumidza kushandisa shoma nguva uye mutengo pane chigadzirwa dhizaini, kuunganidza mhinduro kubva kune vatengi chaivo uye kugadzirisa chigadzirwa chako kumhinduro. Verenga zvimwe nyaya pamagetsi ekugadzirwa.